Sidee ku ogaan kartaa in telefoonkaaga la jabsaday? | Warbaahinta Ayaamaha
Sidee ku ogaan kartaa in telefoonkaaga la jabsaday?
MUQDISHO-AYAAMAHA-Telefoonkaagu dabka ma uga dhamaadaa si degdeg ah? Xirmooyinka internet-kaaga se si dhaqsaha ma u dhamaadaan? Astaamaha noocaas ah ee telefoonnada ayaa muujinaya in lagula wadaago oo ay galaangal u leeyihiin burcadda tiknoolajiyadda.